Indawo eJalimane | Ukuhamba kweholide | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Imvelo namazwe eJalimane
I-Federal Republic yaseJalimane isiye saziwa kakhulu njengendawo yokuvakasha iminyaka eminingi. Lokhu kubangelwe kakhulu ngamathuba amahle okuthutha esakhiweni kanye nezinhlobonhlobo zokukhangisa. Kungakhathaliseki ukuthi abathandi bezokuvakasha, amasiko noma abathandi bemvelo, wonke umuntu uthola imali yakhe kuleli zwe.
Uma ufuna amamyuziyamu aphezulu, izindawo zokudla ezinhle kakhulu namathuba amaningi okugubha, vakashela omunye wemadolobha amane amakhulu kunawo wonke: eBerlin, Hamburg, Munich naseCologne. I-Berlin ngokungangabazeki idolobha elikhulu lezwe futhi liyamangala ngisho nezivakashi ezivamile ngokuphindaphindiwe nesimo sabo esijabulisayo, sokudala.
I-Hamburg, ne-Speicherstadt edume emhlabeni wonke, inikeza ubuhle obuhle, kuyilapho uMunich, inhliziyo yaseBavaria, ikumema ukuba uhambe ngezindawo zokuvakasha. I-Cologne nayo iyathinta ubuhlobo bayo baseRhineland neCologne Cathedral, isakhiwo esivakashelwa kakhulu ezweni.
EJalimane ungahlola iminyaka eyizinkulungwane ezedlule ngesisekelo sezinto eziningi. Nomaphi lapho kukhona khona amaRoma, njengokugeza kanye nama-aqueducts. Ikakhulukazi eyaziwa lapha yi-Trier no-Xanten.
Ngaphezu kwalokho, leli lizwe linikeza amasonto amaningi amahle kakhulu. Ikakhulukazi i-Frauenkirche eDresden ne-Aachener Dom isiye yaqashelwa ngamazwe ngamazwe. Ngomdabu wabo wamatshe othakazelisayo noma izakhiwo ze-Renaissance, zimelela ubufakazi obukhethekile bokuklama kwe-sacral.
Izinkathi Ephakathi zimeleleke kakhulu: I-Germany idume ngezinqaba zayo eziningi nezindlovukazi, okubuyiselwa kwayo futhi kwamukelwa kakhulu. Nakhu ikakhulukazi izinqaba ezihambisana neRhinine neMoselle ukubiza.
Izivini nezindlela zokuhamba ezizungeze le milambo emibili ziphakathi kokuthandana kakhulu ezweni, kuhlanganisa ukufinyelela okulula kalula kokukhangayo kalula. Ngakolunye uhlangothi, i-Neuschwanstein Castle, emhlophe futhi ehlonishwayo entabeni enokhuni eningizimu yeBavaria, ibukeka sengathi ivela emlandweni wezinganekwane.
Kodwa ngisho nabahambi abafuna ubuhle bemvelo, ungaphumi eJalimane ungenalutho. Kukhona inani lamaPhakethe kaZwelonke we-16, leyo ndlu eyayihluke kakhulu emasimini kanye nemvelo.
Ezintathu zazo zimboza iWattenmehr edume emhlabeni wonke enyakatho yezwe, lapho ukuvakasha okuqondisiwe kungenziwa khona.
Kubalandeli bezintaba ezisezintabeni, i-Eifel National Park, lapho izinto eziqhamuka khona zentandokazi zingabonwa, kanti iSaxon Switzerland ne-Elbe sandstone yakhelwe ngokukhethekile. Okokugcina, amapaki amaningi kazwelonke afaka amahlumela amahle kakhulu namahlathi, isibonelo eHarz, Black Forest noma Hunsrück.
Dlulisa amehlo kusigaba sethu Amakhasi ombala wezinto zokubuka eJalimane.
Izwe liphelele kubathwebuli bezithombe nabasebenzi. Lokhu akukona nje ngenxa yesimo sezulu esimnandi, kodwa futhi nasezincekeni eziningi ezahlukene ezingatholakala.
Okokugcina, kungenzeka ukuthenga izingxenye ezithintekayo nezesekeli cishe yonke indawo, futhi izithombe zingabuye zakhiwe kusayithi ngesikhathi esifushane kakhulu uma kunesidingo.
I-Bundeskanlzer noMongameli we-Federal of the ...
I-Flag yaseJalimane - AmaFlegi kuwo wonke amazwe
I-Federal States eJalimane - Imephu & Ama-Capitals
Amakhasi ombala eJalimane